Sitagu — Shwe Media Group TV Channel
Yay Nan Chaung Syartaw Gyi
Sitagu Sayar Taw Gyi
Khit Haung Movies
Home » Sitagu	သီတဂူဗုဒ္ဓဝိဟာရ ကျောင်းတိုက် ရွှေစည်းခုံစေတီတော် တည်ဆောက်ခြင်းမှတ်တမ်း
July 23, 2012 at 8:06 pm / Dhamma, Sitagu
သီတဂူဗုဒ္ဓဝိဟာရ ကျောင်းတိုက် ရွှေစည်းခုံစေတီတော် တည်ဆောက်ခြင်းမှတ်တမ်း
Continue reading » သီတဂူဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်းတိုက် ရွှေစည်းခုံစေတီတော် စိန်ဖူးတော် နှင့် ငှက်မြက်နားတော် တင်လှူပူဇော်ပွဲ
July 13, 2012 at 5:18 pm / Dhamma, Sitagu
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ် မြို့တော် အော်စတင်မြို့ သီတဂူဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်းတိုက် ရွှေစည်းခုံစေတီတော် စိန်ဖူးတော် နှင့် ငှက်မြက်နားတော် တင်လှူပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား (June 4, 2012)
Continue reading » သီတဂူဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်းတိုက် ရွှေစည်းခုံစေတီတော်ဌာပနာသွင်း ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား
July 12, 2012 at 8:36 pm / Dhamma, Sitagu
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ် မြို့တော် အော်စတင်မြို့ သီတဂူဗုဒ္ဓဝိဟာရကျောင်းတိုက် ရွှေစည်းခုံစေတီတော် (April 26, 2012) and (June 4, 2012) ဌာပနာသွင်း ပူဇော်ပွဲအခမ်းအနား
Continue reading » အော်စတင်မြို့ ရွှေစည်းခုံ စေတီတော်ကြီး တည်ဆောက်ရေး မှတ်တမ်းဗွီဒီယို-1
May 9, 2012 at 12:50 pm / Dhamma, Sitagu
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၊ တက္ကဆက်ပြည်နယ်၊ မြို့တော် အော်စတင်မြို့ ရွှေစည်းခုံ စေတီတော်ကြီး တည်ဆောက်ရေးအတွက် ရောက်ရှိနေသော မြန်မာမှုလက်ရာ ဗိသုကာ ပညာရှင် တမ္ပဝတီ ဦးဝင်းမောင် နှင့် အဖွဲ့၏ စေတီတော်ကြီး တည်ဆောက်ရေး မှတ်တမ်းဗွီဒီယို – 1
Continue reading » Sitagu Buddha Vihara Shwe Zee Gone Pagoda Construction-15
April 1, 2012 at 2:59 pm / Dhamma, Sitagu
Continue reading » Sitagu Sayartaw’s Homage Ceremony -3
March 28, 2012 at 2:33 am / Dhamma, Sitagu
Continue reading » Sitagu Sayartaw’s Homage Ceremony -2
March 27, 2012 at 5:00 am / Dhamma, Sitagu
Continue reading » Sitagu Sayartaw’s Homage Ceremony -1
March 25, 2012 at 11:18 pm / Dhamma, Sitagu
Continue reading » Sagai Sitagu Shwe Zi Gon – 1
March 24, 2012 at 3:15 am / Dhamma, Sitagu
Continue reading » Sitagu Buddha Vihara Shwe Zee Gone Pagoda Construction-14
February 29, 2012 at 12:31 pm / Dhamma, Sitagu
Continue reading » Sitagu Buddha Vihara Shwe Zee Gone Pagoda Construction-13
February 29, 2012 at 12:30 pm / Dhamma, Sitagu
Continue reading » Sitagu Buddha Vihara Shwe Zee Gone Pagoda Construction-12
February 29, 2012 at 12:29 pm / Dhamma, Sitagu
Interview Videos Zar Ganar and Academy Swe Zin Htike Zar Ganar and Academy Swe Zin Htike Shwevideos Interview with Singer Khin Maung Toe and Singer Me Me Win Phay
Shwevideos interview with Academy They Mon Myint
ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဗေးဧရိယာ မဟာသင်္ကြန်ပွဲတော်ကြီး တွင် ဗေးဧရိယာ မှ တိုင်းရင်းသားညီအကို မောင်နှမများ ၊ မြန်မာမိသားစု များနှင့်အတူ ရွှေဗွီဒီယို မိသားစု မှ ပူးပေါင်းဆင်နွှဲ ကြမည်။ Could not generate embed. Please try it manualy. Zar Ganar and Swe Zin Htike -1
Zar Ganar and Swe Zin Htike -2
Singer Ko Khin Maung Toe and Singer Me Me Win Phay
Academy Thet Mon Myint in San Francisco
Shwevideos and San Francisco Bay Area Mahar Thingyan
Recent Commentsgjawua on Sitagu Buddha Vihara Shwe Zee Gone Pagoda Construction-15born shoes clearance on Sitagu Buddha Vihara Shwe Zee Gone Pagoda Construction-15fgajkwakw on Sitagu Buddha Vihara Shwe Zee Gone Pagoda Construction-15gunman clive apk on Welcome to Shwevideos!Best Life Quotes on Welcome to Shwevideos! Archives	July 2012
Myanmar Movies Link
Shwevideos Live streaming media group
Shwevideos online live disco chatroom
SingForYou Karaoke recording website
WordPress Video Theme by Copyright © 2013 Shwe Media Group TV Channel. All Rights Reserved.